Chat With Pashan » 2007 » May
47 comments May 29th, 2007
27 comments May 28th, 2007
52 comments May 28th, 2007
यलम्बर नाइटका लागि हङकङ आई पुगेका राजेश पाईल राईसंग मेरो जोर्डनस्थित नाँच घरमा मे २६ मा भेट भएको थियो। आकस्मिक भेटको बेला हामीबीच उनका करियरसंग सम्बन्धित केही सम्वादहरु भएका थिए। ती सम्वादलाई च्याट विथ पशन को रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो अन्तर्वार्ता नभएर सामान्यतयः हामी दुईजनाबीच भएका संक्षिप्त सम्वाद हो –
राजेश पाईल राईका म्युजिक भिडीयोहरू हेर्न तलको प्ले बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। म्युजिक भिडीयो एचकेनेपाल डट कमका पाठक तथा दर्शकको लागि गायक स्वयंले उपलव्ध गराएका हुन्। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया आफ्ना प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला।
पशनः हङकङ कति चोटी आउंनु भयो?
राजेशः खै १३/१४ पटक आएं हुंला।
पशनः नेपाली गायक कलाकारहरुमा सबैभन्दा धेरै पटक हङकङमा आफ्नो प्रस्तुति दिनेमा तपाईं नै नम्वर वान होला नि..?
राजेशः खै म पर्छु कि शम्भु राई पर्नु हुन्छ।
पशनः तपाईको पहिलो रेकर्ड भएको गीत?
राजेशः सम्झनाको कुरा नगर..., यो गीत म १६ वर्षको छंदा रेकर्ड भएको थियो। शव्द जेबी राई र संगीत शक्ति कुमार।
पशनः चलचित्रमा कति गीत गाई सक्नुभयो?
राजेशः ५/६ सय जति गाएं हुंला।
पशनः विवाह भयो?
राजेशः भएको छैन। (हाँस्दै)
पशनः तपाईको गीत जस्तै सुन्दर प्रेयशी त होलान् नि?
राजेशः पहिले थियो अहिले छैन।
पशनः किन त?
राजेशः पहिले प्रेमको महत्व बुझिंन, अहिले प्रेम गर्ने फुर्सद मिलेन। त्यसैले एक्लो छु।
पशनः फ्यानहरुको चिठ्ठी पत्र-
राजेशः ५०/६० मासिक आउंछन् । खासगरी किशोरीहरुको। मलाई थाहा छैन मेरा अधिकांश फ्यान टिनेजर छन्।
पशनः फ्यानहरुबाट प्रेम प्रस्ताव आउंदैनन्?
राजेशः किन नआउनु आउंछन्। तर म उनीहरुको दिल नटुटोस् भनेर सम्झाउने प्रयाश गर्छु। पहिले आफ्नो करियर बनाउन सुझाब दिन्छु।
पशनः गायक नबनेको भए..
राजेशः थाहा छैन के बन्थें। तर म जन्मेकै श्रोता तथा दर्शकलाई स्तरीय गीतहरु पस्कनको लागि हो जस्तो लाग्छ।
पशनः तपाई बढी मात्नु हुन्छ भन्ने सुनिन्छ?
राजेशः सफल व्यक्तिहरुको चर्चा भै रहन्छ। त्यो स्वभाविक हो। किन भने म, म रहिंन। म पब्लिक फिगर परें। त्यसैले हमेशा ममाथि वाच भै रहन्छ। सबै पिउंछन्। अरुले पिउंदा सामान्य विषय हुन्छ। हामीले पिउंदा अनर्थ लाग्छन्।
पशनः यहाँसम्म आइपुग्न कतिको कठिनाईको सामना गर्नु पर्‍यो ?
राजेशः मैले यो क्षेत्रमा स्थापित हुन धेरै संघर्ष गरेको छु। भन्नेले भन्ने गर्छन् – राजेश रातोरात चर्चित भए। तर राजेशको पनि आफ्नै दुःखहरु थिए। पीडाहरु थिए। संघर्ष गर्नु पर्‍यो। मिहिनेत र परिश्रम गर्नु पर्‍यो। यी सबबिना मानिस कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन सक्तैन।
पशनः गायकबाहेक ..
राजेशः मैले नायक पनि बन्ने सौभाग्य पाएकोछु। मैले उदय सुब्बाद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘गुण्डाराज’ मा नायकको भूमिका निर्वाह गरेको छु। म संगीत कम्पोज पनि गर्छु। ‘तिम्रो लागि, पागल छ मन, प्यारी, असर, लेखान्त र कानुन’ चलचित्रमा मेरो आफ्नै संगीत छन्।
पशनः सांगीतिक यात्राको क्रममा कति देश भ्रमण गर्नुभयो?
राजेशः सांगीतिक यात्राको क्रममा भारत, हङकङ, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, द. कोरिया, बेलायत, मलेसिया, कतार, बहराइन, दुबई आदि देशमा पुगेको छु।
पशनः अबको यात्रा..-
राजेशः मे महिनाको अन्तिममा दुबई र जुन महिनामा क्यानडा र दक्षिण कोरिया जाँदैछु।
पशनः शुभकामना, तपाईको प्रगतिको लागि..।
राजेशः धन्यवाद, यहाँहरुको आशिर्वाद पाई रहुं।
188 comments May 27th, 2007
एचकेनेपाल डट कमको विधिवत समुद्घाटन गरी इन्टरनेटको सञ्जालमा प्रवाहित गरि दिनु हुने त्यही व्यक्तित्वलाई लिएर फेरि मैले नयाँ स्तम्भ च्याट विथ पशन शुरु गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव श्री माधवप्रसाद घिमिरे। हङकङमा महावाणिज्यदूतको रुपमा कार्यरत रहंदा सन् २००४ अप्रिल १० तारिख उहाँले एचकेनेपाल डट कमको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको थियो। एचकेनेपाल डट कमको प्रगतिका लागि सही निर्देश र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु हुने श्री घिमिरेको कार्य क्षमता, निपूणता र योग्यताका कारण देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिव जस्तो गरिमामय पदमा बढुवा हुनु भै थप जिम्मेवारीसहित नेपाल फर्कनु भएको थियो। (अपडेटः पछि उहाँ गृहमन्त्रीसमेत हुनुभयो।)
करिव ३ वर्षपछि नेपाल सरकार र हङकङ सरकारबीच १९ अक्टोबर, १९९८ मा भएको द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौतामा पुनरावलोकन गरी नयाँ हवाई सेवा सम्झौता गर्न हालै उहाँको नेतृत्वमा एक टोली हङकङ आएको थियो। यसै क्रममा मैले उहाँको हाल खबर बुझ्न कार्यवाहक महावाणिज्यदूत हेमलाल भट्टराईमार्फत उहाँलाई फोन सम्पर्क गरेको थिएं। त्यस बेला भएका संक्षिप्त सम्वादलाई यहाँ राखिएको छ –
पहिलो दिनः मे २२ मंगलबार २००७
पशनः सर, नमस्कार आराम हुनुहुन्छ?
घिमिरेः नमस्कार, पशनजी ३ वर्षपछि भेट भइयो नि।
पशनः त्यही त सर, अनि व्यस्त त हुनुहुन्न कतै डिस्टर्व त गरिनं?
घिमिरेः मिटिङमा छु, तर छोटो समयको लागि ब्रेक टाइम भएको छ।
पशनः मिटीङ भन्नाले?
घिमिरेः त्यही मिटिङ जुन उद्धेश्यले हामी यहाँ आएका थियौं।
पशनः कुरा कहाँसम्म पुग्यो?
घिमिरेः कुरा टुङ्गि सकेको छैन जारी छ तर अहिले केही समयको लागि ब्रेक टाइम भएको हो।
पशनः त्यसो भए तपाईलाई भोलि फोन सम्पर्क गर्नु पर्ला।
घिमिरेः हुन्छ, मेरो नम्बर टिप्नोस्। यहाँ तुरुन्त फोनको सिम कार्ड पाइन्छ क्यारे त्यही प्रयोग गर्दै छु।
(उहाँले फोन नं. दिनु भयो।)
भोलि पल्ट- मे २३ बुधबार २००७ (फोन सम्वाद)
पशनः सर, नमस्कार
घिमिरेः नमस्कार पशन जी, राम्रो अध्यायको शुरुवात भएको छ। खास गरी नेपालीको लागि। म एकदम खुशी छु। (उहाँले शुरुमै यही सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर कुरा गर्नुभयो।)
पशनः हजुर के के समझदारी भयो?
घिमिरेः मे २२ र २३ तारिख दुई चरणमा भएको वार्तापछि द्विपक्षीय सम्झौतामा केही नयाँ कुराहरु थपिएका छन्। नेपाल र हङकङ दुई पक्षबीच हप्तामा १४/१४ वटा यात्रु सेवा र असिमित पारवाहन सेवा सञ्चालन गरिने सहमति भएको छ। दुबै पक्षबीच ५ वटा इन्टरमिडियट र ५ वटा बियोन्ड पोइन्ट्स गरी बिना पाँचौं स्वतन्त्र उडान सेवा सञ्चालन गर्न सकिने छ।
पशनः त्यसो भए, अब प्राइभेट सेक्टरका हवाई कम्पनीहरुले अवसर पाउंने भए नि?
घिमिरेः अवश्य पनि।
पशनः क्याथे प्यासिफिकको चर्चा निकै चलेको छ। त्यस सम्बन्धी पनि कुराकानी भयो कि?
घिमिरेः हामीले पहिले भएका हवाई सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सहमतिका विषयमा केन्द्रीत रहेर कुरा गर्ने हो। हामीले प्रत्यक्षरुपमा क्याथेसंग कुराकानी या प्रस्ताव राख्ने होइन। हामीले पूर्वाधार मात्र तयार गरिदिने हो। यस विषयमा अर्कै टोलीले पहल गर्ने छ। र अहिले भएका नयाँ सहमतिले प्राइभेट सेक्टरका हवाई कम्पनीहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ।
पशनः हङकङ सरकारले नेपालीमाथि लगाएको भिषा प्रतिबन्ध (प्रवेश आज्ञा) बारेमा पनि यहाँहरुले केही कुरा गर्नु भयो कि?
घिमिरेः हामीले यस विषयमा कुराकानी गरेका छौं। दुई देशबीच पर्यटन विकासका सम्भावनालाई ध्यान दिंदै नेपालीमाथि लगाउंदै आएको प्रवेश निषेधउपर पुनरावोलकन गर्न आग्रह गरेका छौं। उहाँहरुले हाम्रा आग्रहलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याई दिने बताउंनु भएको छ।
पशनः यहाँहरुले धेरै राम्रो गर्नु भयो यसबाट हङकङमा रहंदै आएका नेपाली निश्चित रुपमा लाभान्वित हुनेछन्। अनि नेपालतिर कहिले प्रस्थान गर्नु हुन्छ?
घिमिरेः भोलि जाँदैछु र फेरि जुन १४ मा आउंदै छु।
पशनः यही सहमतिका विषयमा फलो अप गर्न कि?
घिमिरेः होइन, ६ जना सगरमाथा आरोहीको सम्मानमा हङकङमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। त्यसमा सहभागी हुन।
पशनः सबै चिनीया आरोही हुन् कि?
घिमिरेः कुनै अमेरिकी, कुनै बेलायती र कुनै चिनीयाँ नागरिक छन्। तर अमेरिकी र बेलायती भए पनि अहिले हङकङमा बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यस अवसरमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्यटन विकासलाई अभिवृद्धि हुने र सहयोग पुर्‍याउने उद्धेश्यले पत्रकार सम्मेलन पनि गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
पशनः हवस् त सर, तपाईको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद।
घिमिरेः तपाईलाई पनि धन्यवाद।
(यसबाहेक हामीबीच छोटो समयमा निकै कुराकानी भएका थिए। ती सम्वादलाई यहाँ समावेश गरिएन।)
5 comments May 27th, 2007
उच्च पदस्थ अधिकारी